Keeniyaa fi Itiyoophiyaan, akka Al-shaabaab daangaa isaaniitti cehee halellaa hin geggeessine ittisuuf yeroo carraaqaa jiranitti, uummata Siivilii Somaaliyaa irratti humna gitaa olii ka bobbaasan ta’uu dhaabbatoonni gargaarsaa Somaaliyaa keessaa hojjetan gabaasanii jiran.
Gabaasaan keessaa bahu, ka VOAn argate kun akka jedhutti, Keeniyaan Waxabajjii bara 2015 irraa jalqabdee, haleellaa humna qilleensaa kurna hedduu, hawaasa horsiisee-bulaa kutaa Geedoo keessa jiraatu irratti geggeessite.
Kanneen hojii daangaa tiksuutti akka bobba’an dirqsiisaman - ojjetoonni Tajaajila Eegumsa Bineensa Bosomaa, ka Keeniyaa – uummata Somaaliyaa hidhuu fi murtii-seeraa tii ala ajjeesuutti fuuleffatan – jedha – gabaasichi.
Akkasumas, Itiyoophiyaan, uummata horsiisee-bulaa Somaaliee kanneen naannawa daangaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa qubatanii jiran of irraa dhiibuuf jecha, humnoota milishaa ishee daangaa irratti bobbaaftee jirti – jechuun beeksisee jira.
Dubbiu-himaan humnoota ittisaa Keeniyaa, Koloneel Jooseef Owuoth himannaa kana ni haalan. Keeniyaan qiyyaafatni ishee maadheelee Al-shabaab qofa akka tahe dubbatan.
Aangawoota Itiyoophiyaa ka naannawa sanaa argatanii dubbisuun hin danda’amne.
Garuu, Prezidaantiin naannoo sanaa, kan Itiyoophiyaa – Abdii Mohaammud Omaar, gochaale, milishaan addaa “Liyyuu Police” jedhamu geggee – jedhame mara haalanii turan.
Jiraattonni naannoolee kanaa garuu, wanneen gabaasaa sana keessatti waa’ee humnoota biyyoota lameenii ibsaman dhugaa ta’uu dubbatan.